Plume dia nampihatra ny teknolojia fihenam-bidy sy ny asa tanana tena tsara hanamboarana an'ity kanto piano ity. Izy io dia fitaovana mainty sy fotsy fotsy avo lenta. Miaraka amin'ny isa 3 tsy manam-paharoa mikasika ny 88 naoty fitendry mahazatra hammer-action, ity piano ity dia afaka mamerina ny fahatsapana manindry ny lakilen'ny piano akustika mahazatra.
Ny loharanom-peo dia mandray avy amin'ny marika piano malaza eran-tany izay tsy misy marimaritra iraisana. Ary ny amplifier stereo dia miaraka amina fikirakirana 50W mahatalanjona 2 ambony. Raha ny momba ny mpandahateny, ny mpandahateny antsika dia mampiasa tandroka avo roa heny nampidirina fantsom-pifandraisana roa sy andiana fanaraha-maso DSP mitovy amin'ny fanamafisam-peo fanamafisam-peo fanamafisam-peo. Ankoatr'izay, ny stereo teho hifi an-trano amin'ny piano dia hanome vokatra mahavariana.
Raha ny interface sy dock rehetra. Ny piano Plume anay dia feno USB, MIDI, ary jack an-doha, izay ahafahan'ity piano ity manaporofo ny fifehezana ny haavon'ny herinaratra fiara sy ny fanafoanana ny fikorokohana amin'ny mikrôfona. Ary ny piano antsika dia manana herin'ny famoahana 50w * 2, 128 andiany polyphony ary 128tone.
Suria Materia Birao matevina avo lenta
Ohatra Tabilao tsy manam-paharoa 3 Touch Touch 88 Note Standard Hammer-action Keyboard
Loharanom-peo Loharanom-peo avo lenta
Stereo Amplifier Fifanarahana ambaratonga avo 50W * 2
gazety Imported Dual Chartiei High Fidelfy Hom 125nm * 2 DSP Control Equal Louchess PressureContrd BluetoOh Sound Player System Home Theater HIF1 Stereo
interface tsara USB, MIDI, Headphone (fanaraha-maso haavon'ny herinaratra fiara tsy manam-paharoa, manafoana ny fikolokoloana amin'ny mikrô)
Herin'ny famoahana 50W * 2
Demo 88 (Hira hatramin'ny 1000 amin'ny import fanampiny)
Function manan-tsaina Auto Accompaniment, karazany 28 Auto Chord
Dual Timbre, Metronome, Transposition, Reverberation, record / playback, fanaraha-maso mahery vaika amin'ny keyboard, fanohanana ny app mozika.
Teo aloha: Ambongadiny China 88 Keys manakodia ny orinasa Piano Company - Plole Digital Console Piano YY-DJ08 - Plume
Manaraka: Plume Digital Console Piano YY-DJ04
Piano nomerika lafo vidy, Kitendry Piano Smart, Piano mandeha amin'ny herinaratra, Piano Digital Upright, Electric Grand Piano, Fanamboarana Piano Digital,